မွေ့ယာအမြှုပ်သင်္ခါရဘို့လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် - ရွှေ laser
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: CJG-250300LD
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်နို့တိုက်ကျွေးရေးထည်လိပ်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်။ စက်မှထည်လိပ်၏အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်တင်။ မွေ့ယာအဘို့အနိုင်လွန်ခြင်းနှင့် jacquard ထည်ပြားများနှင့်ရေမြှုပ်၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားဖြတ်တောက်ခြင်း။
• Multi-functional ဖြစ်စေ။ ဒါကလေဆာရှုးပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး processing, အအထည်အလိပ်လုပ်ငန်းမွေ့ရာ, ဆိုဖာ, ကုလားကာ, pillowcase များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူကစသည်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောထိုကဲ့သို့သော elastic ထည်အဖြစ်ချည်မျှင်နှင့်အထည်, သားရေ, PU, ဝါဂွမ်း, plush ထုတ်ကုန်, ရေမြှုပ်, PVC, ဖြတ်နိုင်ပါတယ်
• ၏အပြည့်အဝထား လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြေရှင်းနည်းများ။ digitizing, နမူနာဒီဇိုင်းအမှတ်အသားချမှတ်ခြင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ပေး။ ပြီးပြည့်စုံသောဒစ်ဂျစ်တယ်လေဆာစက်ရိုးရာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းအစားထိုးရန်နိုင်ပါတယ်။
• ပစ္စည်းချွေတာရေး။ ဆော့ဖျဝဲအောင်ညွှန်မှတ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလိုအလျောက်အမှတ်အသားချမှတ်ခြင်းလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ 15 ~ 20% ပစ္စည်းများသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမပုဂ္ဂိုလ်များအောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှတ်အသားလိုအပ်ပါတယ်။
• အလုပ်သမားလျှော့ချ။ ဒီဇိုင်း မှစ. ဖြတ်တောက်ရန်, သာအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ချွေတာခြင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်လည်ပတ်တယောက်အော်ပရေတာလိုအပ်ပါတယ်။
• လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း, မြင့်မားသောတိကျစုံလင်ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းနှင့်လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ non-အဆက်အသွယ်အပြောင်းအလဲနဲ့။ လေဆာစက်အပြောက် 0.1mm ရောက်ရှိ။ processing စတုဂံ, ဆွန်းနှင့်အခြားရှုပ်ထွေးသောဂရပ်ဖစ်။
- အဘယ်သူမျှမ tool ကို wear, Non-အဆက်အသွယ်အပြောင်းအလဲနဲ့
- ပြန်လုပ်၏မြင့်မားသောတိ, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှု
- ချောမွေ့နှင့်သန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်ခြင်းအနား; အဘယ်သူမျှမလိုအပ်တဲ့ reworking
- ထည်၏အဘယ်သူမျှမဖွာ, အထည်မရှိပုံပျက်သော
- ဖြစ်နိုင်သောဖြတ်တောက်မှု၏ edgeless ဆက်လက်အားဖြင့်အလွန်ကြီးမား formats အမျိုးမျိုးထုတ်ယူခြင်း
- တစ်ဦးကို PC ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ကိုမှတဆင့်ရိုးရှင်းသောထုတ်လုပ်မှု
- ဖြစ်နိုင်သောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ၏အပြီးအစီးအိပ်ဇောနှင့် filtering ကို
1. ကျယ်ပြန့် format နဲ့အလုပ်လုပ်သောဧရိယာနှင့်အတူပြားချပ်ချပ်အိပ်ရာဖြတ်တောက်ပွင့်လင်း-type အမျိုးအစားလေဆာ။
2. Auto-နို့တိုက်ကျွေးမှုစနစ် (optional) နှင့်အတူပေါ်ကိုအလုပ်လုပ်စားပွဲပေါ်မှာ။ မြန်နှုန်းမြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအိမ်မှာအထည်အလိပ်အထည်နှင့်အခြားကျယ်ပြန့်သောဧရိယာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းများ။
3. စမတ် nesting များနမူနာ software ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါ, ဒါဟာအရှိဆုံးပစ္စည်း-saving လမ်းအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဖြတ်တောက် layout ကိုအစာရှောငျနိုငျသညျ။
4. အဆိုပါဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်ကစက်၏ဖြတ်တောက်ခြင်းဧရိယာထက်ကျော်လွန်တဲ့တစ်ခုတည်းသောပုံစံပေါ်အပိုရှည် nesting များနမူနာများနှင့်အပြည့်အဝ format ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် Auto-နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
5.5လက်မအရွယ် LCD screen ကို CNC စနစ်အမျိုးစုံဒေတာထုတ်လွှင့်ထောက်ခံပါသည်နှင့်အော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း Modes သာအတွက် run နိုင်ပါတယ်။
6. လေဆာရောင်ခြည်ဦးခေါင်းနှင့်အိပ်ဇော system ကိုတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှထိပ်တန်းကုန်ခမ်းတော့မှာစုတ်ယူခြင်းစနစ်အားပြီးနောက်။ စွမ်းအင်ချွေတာကောင်းသောစုတ်ယူခြင်းဆိုးကျိုးများ။
စက်နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter ဖြတ်တောက်ခြင်းလေဆာ
CO2, DC ဖန်လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်
CO2 RF သတ္တုလေဆာရောင်ခြည်ပြွန်
CO2, DC ဖန်လေဆာ 80W / 130W / 150W
CO2 RF သတ္တုလေဆာ 150W / 275W
0 င် ~ 36000 မီလီမီတာ / မိနစ်
အော့ဖ်လိုင်း Servo motion control system,5လက်မ LCD display ကို
စသည်တို့ကို AI အ, BMP PLT, DXF, ပညာ,, DWG,
1 set ကို 550W အထက်အိပ်ဇောပန်ကာ,2စုံကို 3000W မြေအောက်အိပ်ဇောပရိသတ်တွေ, Mini ကိုလေကြောင်းတွန်း
*** မှတ်ချက်: ထုတ်ကုန်အဆက်မပြတ် updated ကြသည်နှင့်အမျှကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် နောက်ဆုံးပေါ်သတ်မှတ်ချက်များသည်။ ***
GOLDEN laser ယူရေးနပ်စစီးရီး Flatbed CO2 လေဆာစက်ဖြတ်တောက်ခြင်း
အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ AREAS Customize လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
Flatbed CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
( "98,4 ×" 63) 1600mm × 2500mm
( "118,1 ×" 63) 1600mm × 3000mm
( "118,1 ×" 82.7) 2100mm × 3000mm
( "118,1 ×" 98.4) 2500mm × 3000mm
( "236,2 ×" 82.7) 2100mm × 6000mm
( "393,7 ×" 126) 3200mm × 10000mm
1. မူလစာမျက်နှာပရိဘောဂအထည်: ပရိဘောဂအထည်, ဆိုဖာထည်, ကူရှင်ချုပ်, ကုလားကာ, မျက်စိကန်း, ကော်ဇော, ဖျာ, ကြမ်းပြင်ကော်ဇော, ခံစားခဲ့ရ, မွေ့ရာ, doormat, valance, tablecloth, အိပ်ရာစာရွက်, bedspread, counterpane, ဖုန်မှုန့်အဖုံး, etc
2. စက်မှုအထည်အလိပ်: filter ကိုအထည်, အထည်, nonwoven, ဖန်ဖိုင်ဘာ, ဒြပ်ဖိုင်ဘာ, ထည်ပြွန်, polypropylene (PP) bolting, polyethylene (PE), polyester (PES), polyamide (PA ဆိုပြီး), ကုတ်အင်္ကျီအထည်, PVC ထည်, ရေမြှုပ်, ပစ္စည်းကာကှယျနှင့်အခြားစက်မှုဇုန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည့်ပစ္စည်းများ။
3. အထည်ချုပ်အထည်: စသည်တို့ကိုအစာရှောင်ဖက်ရှင်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း, အားကစား, ရေကူးဝတ်စုံ, စီးပွားရေးဝတ်စုံ, ရေငုပ်ဝတ်စုံ, ထိတွေ့မှုဝတ်စုံ, အစင်း & plaids ထည်, ဒြပ်သားရေ, စစ်မှန်သားရေ,
4. အဆောက်အဦးအပြင်ထုတ်ကုန်: မှာတဲ & မြှေးပါးဖွဲ့စည်းပုံ, PE / PVC / TPU / နဲ့ Eva / အောက်စဖို့ထည်, polyester, နိုင်လွန်, PVC coated ထည်, PTFE, ETFE, တာပေါ်လင်, ပတ္တူ, PVC တာပေါ်လင်, PE တာပေါ်လင်, ရွက်အထည်, ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပစ္စည်းများ, ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ကစားစရာအရုပ်, ငွေဖောင်းပွမှုရဲတိုက်, ငွေကြေးဖောင်းပွလှေ, လှိုင်းလင်းတ, မီးပူဖောင်း, လေထီး, Paragliding, လေထီးယာဉ်စီးခြင်း, ရော်ဘာ dinghy, marquee, မြတ်သော, နေကာ, etc
5. Automotive အတွင်းပိုင်း: စသည်တို့ကိုကားတစ်စီးထိုင်ခုံအဖုံးကားခေါငျးအုံး, မော်တော်ကားဖျာ, မော်တော်ကားကော်ဇော, မော်တော်ကားကော်ဇော, pillowcase, လေအိတ်, အလိုအလျောက် dustproof အဖုံး, ထိုင်ခုံခါးပတ် (ဘေးကင်းလုံခြုံရေးခါးပတ်),
6. က Non-ယက်အထည်: ကာကှယျပစ္စည်း, ဖန်ဖိုင်ဘာ, polyester ဖိုင်ဘာ, မိုက်ခရို, Cleanroom Wiper, မျက်မှန်အထည်, မိုက်ခရို Wiper non-မြေမှုန့်အထည်, သန့်ရှင်း Wiper, စက္ကူနှီး, etc
→ ဖွာကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြင်းထန်သောတိကျမှန်ကန်မှု, သန့်ရှင်းဖြတ်တောက်မှုနှင့်အလုံပိတ်ထည်အနား။
→ လေဆာစသည်တို့ကိုပိုး, နိုင်လွန်, သားရေ, neoprene, polyester ဝါဂွမ်းနှင့်အမြှုပ်နှင့်တူ, များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများဖြတ်ဖို့သုံးနိုငျ
→ အဆိုပါဖြတ်တောက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အဘယ်သူမျှမစိတျအပိုငျးအဓိပ်ပာယျအဝတ်မထိဖို့လေဆာရောင်ခြည်ထက်အခြားဘာမှမလိုအပ်ထည်ပေါ်မဆိုဖိအားမပါဘဲလုပ်နေကြတယ်။ ပိုးနှင့်ဇာနဲ့တူနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအထည်များအတွက်အထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသောသောထည်ပေါ်တွင်မကျန်မရည်ရွယ်သောအမှတ်အသားများရှိပါတယ်။
acrylic Wood က MDF ဘို့အတွက် CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အကြီးစားဧရိယာကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း flatbed ။ 150 ~ 800 watts က။ သစ်သား, MDF, acrylic နှင့်အခြား Non-သတ္တုကြော်ငြာဖြတ်တောက်မှာကောင်းသော ...
အားကစား Jersey အဝတ်အစားအဘို့အစက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရား Printed အထည်အလိပ်လေဆာ
VISIONLASER ဖြတ်တောက်ခြင်း SYSTEM - √အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေး√စကင်√အမြင့်မြန်နှုန်း√ရှာဖွေရေးပျံနှင့် sublimated လိပ်၏ပုံနှိပ်ပုံအသိအမှတ်ပြု ...
အော်တို Printed ထည်များအတွက်စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းပျံ Scan ကိုလေဆာနို့တိုက်ကျွေး
VisionLASER စနစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဆာထိန်းချုပ်မှုစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးသစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီး software ဖြစ်ပါသည်။ Vision ၏လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုအလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ် ...